Gareth Bale oo Shuruud ku xiray in uu sii joogo Real Madrid? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Gareth Bale oo Shuruud ku xiray in uu sii joogo Real Madrid?
(13-7-2018) Laacibka xulka qaranka Weles iyo kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xaqiiqada ku aadan inuu ka tagayo garoonka Santiago Bernabeu inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga ee haatan socda.
Gareth Bale ayaa wareysi uu ku bixiyay radio “Cadena COPE” wuxuu kaga warbixiyay xustaqbalkiisa kooxda Real Madrid wuxuuna yidhi: “Laga yaabee inaan sii joogo kooxda Real Madrid ama laga yaabee inaan ka tago, laakiin waa inaan la hadlo wakiilkeyga”.
Xidiga ugu qaalian kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa wuxuu sii raaciyay hadalkiisa: “Waxaa doonayaa inaan ka qeyb qaato kulamada ugu badan ay kooxda ciyaareyso, si aan u sii joogo”.
Gareth Bale ayaa hadalkiisa kusoo xidhay: “Aad ayaan uga niyad jabay inaan kusoo bilaawan finalka Champions League, ma aanan daawanin goolkeygii cajiibka ahaa ee aan kulanka ka dhaliyay, sababtoo ah waxaan galay fasax waxaana gooyay dhamaan wicitaanada’.
Si kastaba laacibka xulka qaranka Weles iyo kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa ka helaya xiiso aad u balaaran kooxda reer England ee Manchester United, kadib markii uu saxiixiisa xiiso balaaran ka muujiyay adeegiisa macalinka reer Portugal ee José Mourinho wuxuuna doonayaa inuu la saxiixdo suuqan xagaaga.